वीर अस्पतालले सुरु गर्‍यो टेलिमेडिसिन सेवा, अब फोनबाटै डाक्टरसँग परामर्श लिन सकिने – Health Post Nepal
वीर अस्पतालले सुरु गर्‍यो टेलिमेडिसिन सेवा, अब फोनबाटै डाक्टरसँग परामर्श लिन सकिने
२०७८ मंसिर १६ गते १४:३३
कोरोना उपचार प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालले ‘टेलिमेडिसिन सेवा’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा अस्पतालले बिहीबारबाट ‘टेलिमेडिसिन सेवा’ सञ्चालनमा ल्याएको हो। अस्पतालका प्रमुख डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले ११३३ को हटलाईन प्रयोग गरेर सेवा लिन सकिने बताए।
विशेषज्ञ चिकित्सकले ‘टेलिमेडिसिन सेवा’ को माध्यमबाट बिरामीलाई आवश्यक परामर्श तथा उपचार सेवा प्रदान गर्ने छन्। यो सेवा निःशुल्क हुने जनाइएको छ।
पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि र अस्पतालमा बिरामी उपचार सेवा सरल किसिमले दिने उदेश्यले ११३३ को हर्टलाइन प्रयोगमा ल्याएको थियो। उक्त हर्टलाइन अहिले वीर अस्पतालबाट ‘टेलिमिडिसिन’ सेवाको रुपमा सारिएको हो।
टेलीमेडिसिन केन्द्रबाट हाललाई कोरोना संक्रमणको विषयमा चिकित्सकीय परामर्श दिइने छ। त्यसका लागि १ जना मेडिकल अफिसर र २ जना पारामेडिक्स गरी ३ जनाको टोली ३ सिफ्टमा रहनेछ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) देखा परेको अवस्थामा टेलीमेडिसिन सेवा प्रभावकारी हुने चिकित्सकले बताएका छन्।
‘घरमा बसेका बिरामीले केही परामर्श तथा उपचार सेवा लिनका लागि टेलीमेडिसिन सेवा धेरै प्रभावकारी हुन्छ,’ डा. बस्नेतले भने, ‘हर्टलाइनमार्फत् बिरामीले सिधै विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श सेवा लिन सक्नेछन्।’
कलसेन्टरमा बसेका स्वास्थ्यकर्मीमार्फत् बिरामीले आफ्नो समस्या अनुसार सिधै विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श लिन सकिने अस्पतालले जनाएको छ। टेलिमेडिसिन सेवाबाट २४ घन्टा परामर्श लिन सकिन्छ।
सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जेठ ६ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत् कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालको मातहतमा रहेर केन्द्रीय १३ वटा अस्पताल तथा सातै प्रदेशका अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीलाई सहज बनाउने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार नै टेलीमेडिसिन सेवाको थालनी सुरु गरिएको हो।
सबै अस्पतालमा भएको बिरामीको विवरण युनिफाइड अस्पतालमा हुनेछ।
‘टेलिमेडिसिन’ मार्फत कहाँ जाने, कहाँ बेडको सहज उपलब्धता छ भन्ने बिषय चिकित्सकले सुझाउँछन्। टेलिमेडिसिन सेवा विस्तारै केन्द्रीय अन्य अस्पताल तथा प्रदेशस्तरमा सुरु हुने डा. बस्नेतले बताए।
विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकले सम्बन्धित प्रदेशको टेलिमेडिसिन सेवा हब र प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकले केन्द्रीय हब अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग परामर्श गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
‘सर्वसाधारणले टेलिमेडिसनमार्फत् सहज सेवा लिन सक्छन्। हाम्रो चाहना नै गुणस्तरीय सेवा दिने हो,’ डा. बस्नेतले भने। डा. बस्नेतले नयाँ भेरियन्टको मध्यनजर गर्दै अस्पतालको सेवाको विस्तार चुस्त राखेको जानकारी दिए।
हाल वीरमा कोभिडका लागि दुई सय बेड सञ्चालनमा छन्। जसमा एक सय जनरल, ५० आइसीयू र ५० एचडीयू बेड सञ्चालनमा छन्।
‘सर्जिकल भवनबाट ५ सय बेडसम्म सञ्चालन गर्न सकिने हाम्रो क्षमता छ,’ डा. बस्नेतले भने, ‘तुरुन्तै चाहिएको खण्डमा थप ५० आइसीयू बेड तयारी अवस्थामा छन्।’
नयाँ भरियन्ट आएको खण्डमा बेडसँगै जनशक्ति पनि थप गर्ने तयारी भइरहेको डा. बस्नेतले जानकारी दिए। डा. बस्नेतले अघिल्लो कार्यकालमा टेलिमेडिसिन सेवाको अवधारणा अगाडि सारेका थिए।
‘घरमा बसेका बिरामीलाई कहाँ–जाने र के गर्ने भन्ने धेरै दुविधा पर्ने सक्छ। सबै सेवाको परामर्श लिनका लागि यो सेवा एकदमै प्रभावकारी हुनेछ,’ डा. बस्नेतले भने।